Tijaabooyinka Leak - Delta Engineering Belgium
Kariifka qaybta "Tijaabooyinka daadinta"
Qalabka daadinta ku dhexjira - 1 madaxa
Qalabka elektrooni-ka-dhiska ee dhismay ee leh muraayad muuqaal leh, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada caaga ah.
Qeybta waxaa lagu dhexgali karaa mashiinka jira ama sidoo kale lagu dari karaa khadka jira.
Published in Dhismaha
Qalabka tijaabada ku shaqeeya ee dhismay leh istiraatijiyad muuqaal leh, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada caaga ah.
Qalabka tijaabada ku shaqeeya ee dhismay - madax badan
Qalabka tijaabada ku shaqeeya ee dhismay leh istiraatijiyad muuqaal leh, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada caaga ah - 1 ilaa 4 madax.
Qalabka tijaabada ku shaqeeya ee dhismay leh istiraatijiyad muuqaal leh, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta foosto caag ah.
Khamiis, 19 May 2016 by Injineer Delta
ABCDEF 1 UDK050 UDK055 UDK250 UDK310 UDK35X 2 3 dhicitaanka ogaanshaha dhalada opt opt ​​opt ​​opt ​​4 xannibaadda indha indheynta opt opt ​​opt ​​opt ​​5 xoqitaanka opt opt ​​opt ​​opt ​​6 UL / CSA ansixinta vvvvv 7 tijaabada socodsiinta gawaarida vvv
Published in Suuska cadaadiska, Tijaabooyinka liita
Tijaabinta dhaqaalaha - 1 madax
Dhaqaalaha 1-madaxa daadinta tijaabada, si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada balaastikada.
Published in ma guurto ah
Arbaco, 15ka Juun 2016 by Cristina Maria Sunea
Mashiinka firaaqada oo buuxa - 1 madaxa
Baaraha tijaabada leh 1 madax. Asal ahaan waa UDK050 si buuxda loo ilaaliyo, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta dhalooyinka caagga ah ee madhan.
Qalal tijaabinta ilkaha - 1 madaxa
Baaraha tijaabada ah ee leh madaxa 1, oo si gaar ah loogu talagalay tijaabinta durbaanka L-ring.
Talaado, 11 Maarso 2014 by Injineer Delta
Tijaabada tijaabada - 1 madaxa
Waxqabadka horumarsan ee 1-madaxa daadinta tijaabada, si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada balaastikada.
Tijaabiyaha liita - madax badan
Tijaabinta dhaqaalaha, si gaar ah loogu talagalay tijaabinta alaabada balaastikada - 1 illaa 4 madax.